समुद्रमाथि ५५ किमी पुल बन्यो, हामीले सकेनौं ५० मिटरको पुल
काठमाडौं- छिमेकी मुलुक चीनले समुद्रमाथि ८ लेनको ५५ किलोमिटर लामो पुल आठ वर्षमा तयार गरेको खबरले यतिबेला दुनियाँ तरंगित छ। नजिकको छिमेकी चीनले यस्तो चमात्कार गरिरहँदा हामीले भने आठ वर्षमा खोलामा पचास मिटरको पुल बनाउन सकेका छैनौं ।
समुद्रमाथि तयार भएको ८ लेनको ५५ किलोमिटर पुलको दृश्य देखेपछि मलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा आठ वर्षदेखि अल्झिएको २ लेनको ५० मिटर लामो पुलको सम्झना आयो। ८ वर्षअघि शिलन्याश भएको यो पुल अझै तयार भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओली पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक उन्नतिमा चीनले फड्को मारेको उदाहरण दिन हरेक औपचारिक कार्यक्रममा चुक्दैनन्। तर उनी आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने एउटा पुल निर्माणको लागि पिलर गाडेको ८ वर्ष वितिसक्दा ५० प्रतिशत पनि काम भएको छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापाको गौरादहबाट कमल गाउँपालिकास्थित सोलमारी जोड्ने कृष्णीखोला माथि निर्माण हुने पुलको ठेक्का तत्कालीनप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा भएको थियो। तर त्यसपछिका हरेक सरकारको समयमा बजेट छुट्टिए पनि राजनीतिक प्रभावमा पारेर ठेकेदारले काम अल्झाउँदै आएका छन् ।
कृष्ण खोलामाथिको पुल शिलान्यास भएको आठ बर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वटा निर्वाचनमा यही क्षेत्रबाट लड्दा पुल निर्माण गर्ने आश्वासन दिँदै आएका छन्। तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले समेत सो पुल निर्माण एक वर्षभित्र गरिसक्ने आश्वासन दिएका थिए।
गौरादह नगरपालिकाको वार्ड नम्वर ९ लाई जोड्ने यो एक मात्र पुल पनि हो। साविकको बैगुनधुरा गाविस र हाल गौरादहको ९ नम्वर वार्ड जान यही पुल भएर जानु पर्ने हुन्छ। यो पुल निर्माण हुन नसक्दा नगरपालिकाको ९ नम्वर वार्डवासी र कमल गाउँपालिकाको सोलमारी, सरङपाडा आदी बजारबासी १० किलोमिटर उत्तरको पूर्व–पश्चितम राजमार्ग पुग्न बाध्य हुन्छन्।
यो पुलको बारेमा राज्यका उच्च ओहोदामा पुगेका व्यक्तिलाई थाहा नभएको होइन। हालका अर्थमन्त्री डा. युवाराज खतिवडाको गृहनगर मात्र होइन, उनको पुर्खौली घर बैगुनधुरा जान यही बाटो प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ।
गौरादह नगरपालिका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको गृह नगर मात्र होइन। यहीबाट हालका महान्यायाधिवक्ता तथा पूर्व कानुनमन्त्री अग्नी खरेल, एक नम्वर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले राजनीति गर्दै आएका छन्।
चीनमा ५५ किलो मिटरको पुल ८ बर्षमा निर्माण हुँदा कृष्णिखोला माथिको पुल ८ बर्षसम्म बन्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको एक नम्वर प्रदेशका कानून मन्त्री कार्कीले बताए। बुधबार गौरादह बजारमा आयोजित दशैं विशेष मेलाका प्रमुख अतिथि भएर आएका मन्त्री कार्कीले पुल निर्माण यो बर्षभित्र नगरे ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
पुल निर्माण नगरे ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने चेतावनी मन्त्री र सांसदले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यसअघिको चुनावी भाषणामा गर्दै आएको स्थानीय पत्रकार युवराज रेग्मी बताउँछन् ।गौरादह नगरपालिकाबाट कमल गाउँपालिका जोड्ने यो पुल निर्माण भए चर्चित हास्यव्यंग्यकार सिताराम कट्टेलले चिनाएको सोलमारी गाउँका वासिन्दाले पनि सुविधा पाउने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री भए लगत्तै केपी शर्मा ओलीले निर्धारित समयमा बाटो र पुल निर्माणको काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने भन्दै निर्देशन दिए पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पुल र बाटो अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई भने केही गर्न नसकेको स्थानीय राजु फुँयालले गुनासो गरे।
पाता कस्ने आश्वासन २८ वर्षसम्म पुरा भएन
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा अलपत्र परेको अर्को पुल हो, हुलाकी राजमार्गस्थित रतुवा खोलामाथिको पुल। यो पुलको शिलान्यास १५ वर्षअघि भएर हाल ९ वटा पिलर ठडइएको छ । तर बाटो निर्माण नहुँदा झापा र मोरङलाई मोटरबाटोबाट जोड्न सकेको छैन।
झापाको पश्चिमी क्षेत्रबाट लगातार संसदीय चुनाव लड्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले २०४८ सालमा सो क्षेत्रमा चुनावी सभामा गरेको भाषण हालसम्म पनि चर्चित छ। उनले बाढी पीडित र नदी कटानबाट वर्षेनी सयौं बिघा जमिन गुमाएका किसान र वासिन्दालाई आस्वस्त दिलाउन बारम्बार एउटा भनाइ राख्थे –‘अब मावा र रतुवाको पाता कसिन्छ।’ तर अहिलेसम्म दुवै खोलामा तटबन्ध निर्माण गरिएको छैन। वर्षेनी बाढीले यहाँका बासिन्दालाई सताउने गर्छ ।
ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने मावा खोला झापा र मोरङको सीमामा पर्छ भने रतुवा दमक नगरपालिकालाई झापाका अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकालाई छुट्याउने खोला हो। दुवै खोलाले बर्षेनी खेतियोग्य जमिन कटान गर्ने गरेको छ। रतुवाको बाढीले हालसम्म एक हजार बढीको घरबास उठीबास लगाई सकेको छ। तर अझैसम्म मावा र रतुवामा तटबन्ध गरिएको छैन। स्थानीय भन्छन्, पाता कस्ने ओलीको आश्वासन अहिलेसम्म पुरा भएन ।